I-2019 I-Sermorelin Iziphumo ze-Acetate: Ukulwa nokuguga nokulahlekelwa kwesisindo!
Yonke into ngeFasoracetam
1. Yintoni iSermorelin Acetate?
2. Indlela yokuSebenza-iSermorelin Acetate
3. Izibonelelo zokuthatha iSermorelin Acetate
4. Sinokusebenzisa njani i-Sermorelin Acetate?
5. Siyakubona nini iziphumo ze-Sermorelin Acetate?
6. Sermorelin Acetate effects effects
7. Indawo efanelekileyo yokuthenga iSermorelin Acetate
I-Sermorelin acetate yinkampani yezobugcisa ehlelwe ngokufanayo ne-hormone yokukhula yemvelo ekhupha i-hormone (GHRH).
I-Sermorelin acetate iye yaziwa ngokukwazi kwayo ukukhuthaza i-pituitary gland ukuvelisa kunye nokubethelela i-hormone yokukhula.
Sermorelin Acetate (86168-78-7) i-hormone ye-hormone ye-peptide elandelelanayo eyenziwe nge-29 amino acid. I-FDA ivumele le nkunkuma ukuba yonyango lwabantwana, kodwa amayeza amaninzi emhlabeni jikelele asebenzisa i-Sermorelin Acetate kwileyibhile yokwandisa amazinga e-hormonal ukukhula kwizigulane zabantu abadala.
Ngokungafani nezinye izibonelelo zeHGH, i-Sermorelin Acetate ingasetyenziswe kwilebula. Ngakolunye uhlangothi iindleko zeSermorelin ziphantsi xa zifaniswa nezinye iziyobisi ezifanayo. Esi sigqirha sinqunyelwe ukuba sisetyenziswe ebusuku kwaye kufuneka sithathwe ubuncinane isiqingatha seyure ngaphambi okanye emva kokutya. Ukuthatha i-Sermorelin Acetate ebusuku kuqinisekisa ukukhula okupheleleyo komjikelezo wendalo wakho we-hormone yokukhula kwakunye nokuvuselela i-pituitary gland kwi-sleep sleep. Ngakolunye uhlangothi, i-Sermorelin Acetate ifumaneka kwiifom ezimbini, nto leyo Sermorelin yomlomo amalungiselelo kunye nefom yefom
Umsebenzi we-Sermorelin ngokuvuselela imveliso ye-hormone yokukhula emzimbeni kwaye imiselwe kakhulu kubantwana abane-hormone deficiency. Nangona iziyobisi ziye zavunywa ukuba zisetyenziswe kubantwana, oogqirha baye baqonda ukuba iSermorelin nayo ibalulekile kwaye iluncedo xa imiselwe abantu abadala. Umzekelo, abanye abantu abadala Ukulwa nokuguga kunye neSermorelin ngelixa abanye bekhululekile ngeSermorelin kunye nokulahleka kwesisindo. Isilwanyana senza ukuba izilwanyana zenze i-hormone yokukhula emzimbeni wakho.
I-GHRH yi-peptide equle i-29% yamino acid ekhoyo kwi-hormone yokukhula. Ezi zi-amino acid zizona zifanelekileyo kwiGHRH. Ngokuqhelekileyo, njengabantu abaneminyaka yobudala, i-hormone yokukhula efihliwe ngilazi yecalayiyo kwaye ininzi yezifundo ezenziwe ziingcali ezahlukeneyo zonyango ziye zabonisa ukuba i-Sermorelin inakho ukubuyisela amazinga e-hormonal ukukhula emzimbeni wakho kwizinga lentsha ngokuphakamisa i-IGF-1 ( I-Factory Growth Factor 1).
Nangona kunjalo, indlela efanelekileyo yokufumana i-Sermorelin acetate inzuzo kukuthatha isilinganisi esifanelekileyo kwaye ulandele imiyalelo yesigqirha sakho. Ukugqithiswa kwezidakamizwa kungakhokelela kwimiphumo engavumelekiyo okanye mhlawumbi ukugxininisa ukuba uphumelele kwiimeko zempilo. U-Underdosing uya kukukhanyela ithuba lokunandipha inzuzo ye-Sermorelin acetate. Ngangoko unako ukufikelela kalula kwisiza esivela kwiiplani ze-intanethi okanye nakwi-pharmacy, ungaqalisi ukuthatha leyeza ngaphandle kokuba uphononongo lwezempilo.
Nangona i-Sermorelin indleko liphantsi kuneemithi ezifanayo kwiimarike, linika iziphumo eziphezulu. Kukho ezahlukeneyo Sermorelin Acetate iziphumo ukuba abasebenzisi okanye izigulane ezithatha ngokuchanekileyo kwaye zilandele imiyalelo yesigqirha. Enye yeenzuzo ezibalulekileyo zokusebenzisa le nkunkuma kukuba unokukhetha ifom yefayili ekhululekile nawe. Kukho umthamo womlomo ukuba awukwanelisekanga ngeejoza kwaye unakho ukuya kwinqanaba le-injection, kodwa iziphumo ziyafana. Ukuphononongwa kwakhona kwe-Sermorelin Acetate yindawo efanelekileyo kakhulu yokujonga kwiintlobo abanye abasebenzisi abonwabileyo emva kokuthatha le nkunkuma. Kukho ezinye iinzuzo ezibalulekileyo ozakuzonwabisa ngazo ngokuthatha le nkunkuma, kwaye zibandakanya:
★ I-Sermorelin Acetate yokulwa neMiphumo yokuguga
Esi sigqirha sithathwa njengenye yezona zinto zincinci zokunciphisa ukuguga kwiimarike kuba inceda ekuphuculeni izicubu kunye neeseli ezonakaliswe emzimbeni wakho. Oku kugcina isikhumba sakho sisesimweni esihle kunye nentsha, ngaloo ndlela kunciphisa imiphumo yokuguga njengemizila emihle kwesikhumba kunye namalungu athathaka. Amanqanaba aphantsi ekumeni kwe-hormone aphumela ekutshintsheni ekubonakaleni kwakho kwaye uyaziwa ngokuba yimbangela enkulu ye-droopy okanye i-skin yolwazi kunye nemibimbi. Uninzi lwe Sermorelin Ukuhlaziywa kweAcetate bonisa ukuba abaninzi abasebenzisi beziyobisi bayakuvuyela iziphumo ngakumbi ukwenzela ukuphelisa iimpawu zokuguga.
Ehlabathini lonke, izigidi zabantu Ukulwa nokuguga kunye neSermorelin kunye neziphumo ziyamangalisa kakhulu. I-Sermorelin iphinda ibuyisele ukusebenza ngokuqhelekileyo komzimba wakho ngokulungisa zonke iingxaki ezibangelwa yi-HGH engenako. Ukusetyenziswa kweziyobisi ukuqala ingxelo yomzimba eqhelekileyo kunye nenkqubo yokukhusela ephendula kumazinga aphezulu e-HGH kwenza abasebenzisi baphuculise ubukeka babo kwaye bancitshise iimpawu zokuguga.
★ I-Sermorelin Acetate yokuLahla kwesisindo
Ucwaningo oluqhutywe ngabaphengululi abahlukeneyo luye lwaluqinisekisa ukuba abantu abadala abagxininiswe ukukhuluphazeka nokulahlekelwa ubunzima kunokuba namazinga aphantsi kwe-hormone kunezona zizinzi. Enyanisweni, abaninzi abantu bathanda iSermorelin kunye ukuhla ukusinda isilinganisi sokulungisa isisindo. I-Sermorelin acetate ibonakaliswe ukuba isilwanyana esifanelekileyo ukunceda abantu abangaphezu kwamandla amaninzi ukuchitha ubunzima obuninzi ngokuveliswa kwemveliso ye-hormone emzimbeni. Isilwayo sinxulumene nokunyuka kwamahomoni okukhula emzimbeni, okubangela ukuphuhliswa kweethambo kunye nobukhulu bomzimba kunye nokunciphisa amafutha omzimba. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, qhagamshelana neyeza lakho lokulahleka komzimba okanye ugqirha wokutya.
★ Ezinye iintlawulo ze-Sermorelin Acetate
Kukho nezinye iintlobo oza kuzinandipha ngokuzithatha ngokufanelekileyo ngokuchanekileyo izidakamizwa, kwaye zilandelayo zilandelayo;
Ukuphuculwa kweeMaminerali; Izifundo zeSermorelin zibonakalise ukuba ukungabikho kweHGH ngakumbi kubantu abadala kukukhokelela ekunciphiseni ukuxinwa kwethambo, okwandisa umngcipheko we-osteoporosis. Ukuthatha i-Sermorelin malunga neenyanga ze-12 okanye ngaphezulu kunokuphucula ukuxinwa kwethambo lakho kunye nokunciphisa amathuba okuphuhliswa kwe-osteoporosis.
Uphucula amandla omzimba; Ngenxa yenguqu eyenziwa yilo mzimba emzimbeni wakho, ngokuphucula ukuveliswa kwehommone yokukhula, okukhokelela kwisakhiwo semisipha, kwandisa amandla omzimba. Uza kuba nemiphumo engcono emva kokuba uthathe izidakamizwa malunga neenyanga ze-12.
Ukuphucula i-sex drive: abantu abanamazinga aphantsi okukhula kwe-hormone bahlala benengxaki kunye ne-libido yabo ngenxa yamanqanaba omzimba aphantsi. Uninzi lwabantu abadala abasebenzisa i-acetate yeSermorelin baye babika ukuphucula nge-drive yabo yesondo kwakunye nokufumana isisombululo sokunyuka kwexesha elide.
Ukuphucula ubukhulu besikhumba; Ukunciphisa i-collagen yesikhumba kunye neziphumo ezinobungakanani bamanqanaba e-hormone yokukhula emzimbeni wakho. Ngenhlanhla, i-Sermorelin Acetate yipilisi efanelekileyo kakhulu yokusombulula zonke iimeko zesikhumba.
IMetabolism; Ukukhubazeka kwehommoni yokukhula emzimbeni wakho kubangela ukuphumla okufutshane kwe-metabolism, kunye ne-Sermorelin Acetate unyango inokuphelisa le meko. Ulwaphulo lweHCGH ludlala indima ebalulekileyo ekunyuseni ukwenziwa kweprotheni, ukulungelelanisa i-carbohydrates metabolism, nokunyusa izinga lokuxutywa kweoli kunye nokunciphisa i-cholesterol embi. Iimpembelelo ze-metabolism ekuphuculeni amanqanaba e-HCG nazo zibangele impilo enhle kunye nokubunjwa komzimba.
Ezinye zezinye izibonelelo ze-Sermorelin Acetate ziquka; ukunyamezela kwenyuka, ukunyamezela komzimba, ukuphulukiswa kwilonda, ukukhusela umzimba kunye nempilo ye-cardiovascular and sleep quality.
Ukusetyenziswa kwanoma yiphina isilwanyana ngaphezulu SI-ermorelin I-Acetate kufuneka ikhokelwe kwaye iholelwe ngugqirha wakho emva kokuhlolwa kwezokwelapha. Ngamanye amaxesha umlinganiselo ochazwe kwilebula unokuba lukhulu nangaphantsi kuxhomekeke kwinqanaba lemeko ofuna ukuyiphatha. Amayeza akho, ngoko ke, makabeke isilinganiselo esifanelekileyo kunye nomjikelo weziphumo ezingcono. Isilinganiselo esininzi sincike kulokho okufuneka uyenze ngokomzekelo ISermorelin kunye nokulahleka kwesisindo i-dosage ingaba yohluke kwi-Fighting Age kunye neDermannlin dose. Njalo qiniseka ukuba ulandela yonke imiyalelo enikwe ngugqirha wakho kwaye uphakamise konke ukukhathazeka kwakho phambi kokuba uqale ukuthatha i-Sermorelin Acetate dosage.
Ngokuqhelekileyo, i-Sermorelin Acetate ilawulwa ngejoza ekhaya lakho, kwiofisi yegqirha, okanye nakwiklinikhi esondeleyo. Ngenye indlela, amayeza akho anokukuqeqesha ngendlela yokuzifaka ngaphakathi ekhaya ngaphandle kokuvakashela rhoqo kwiklinikhi malunga nomyinge. Nangona kunjalo, xa ujova umyinge, qiniseka ukuba ulandele inkqubo yejoyi ngokuchanekileyo njengoko ufundiswa ngamayeza. Ukugqithiswa kwempahla okanye iil injection ezingafanelekiyo kunokukhokelela kwimiphumo emibi, engeyonto okulindeleyo xa uthatha i-Sermorelin Acetate. Kwakhona, khumbula ukuqwalasela oku kulandelayo xa uthatha isiza;
Khangela ukuba i-Sermorelin Acetate icacisiwe okanye iqulethe iindidi, ukuba kunjalo ke ungayisebenzisi. Ngakolunye uhlangothi, ukuba i-vial yonakaliswe okanye ichithekile, kwakhona ungahlali kude neziyobisi uze uxelele ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba ukhokele.
Ungaze udibanise i-acetate yeSermorelin xa udibanisa.
Qinisekisa ukuba wena inject iSermorelin acetate emva kokuxuba. Kukwacetyiswa ukuba ulahle iyeza elingasetyenziswa.
Xa usenokusebenzisa nayiphi enye i-hormone yokunyusa, kufuneka uyeke ukuthabatha okungenani iveki enye ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-Sermorelin acetate dosage yakho. Phakamisa yonke imibuzo okanye iinkxalabo zakho ngamayeza okanye oomachiza kunye naye umxelele ukuba ungaphantsi kweyeza unyango okanye omnye unyango. Oku kuya kwenza kube lula ukuba ugqirha wakho anike isiluleko esifanelekileyo kuba ezinye iziyobisi zingaphazamisa imisebenzi yeSermorelin emzimbeni wakho.
Njalo, qiniseka ukuba ugcina iyeza, iisringiti eziphuma kubantwana zifike kwaye zihambe ezifuyweni zakho. Ungalokothi uphinde usebenzise izilenge okanye nayiphi na into oyisebenzisayo ekulawuleni I-Sermorelin dosage. Enye into ebalulekileyo yindlela olahla ngayo umveliso emva kokusetyenziswa. Qhagamshelana nogqirha wakho, ukukucebisa ngemimiselo engcono kunye neyendawo yokulahla kakuhle imveliso yeyeza kummandla wakho.
Ukuba uthe waphoswa nayiphi na i-Sermorelin Acetate dosage, qiniseka ukuba uyithatha ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Nangona kunjalo, ukuba uqaphela ngokukhawuleza xa kusondele ixesha lokulinganisa okulandelayo, unokweqa isilinganisi esicatshulwayo kwaye uye kwinqanaba elilandelayo. Musa ukuthatha i-dose ephindwe kabini ukuhlawulela umntu olahlekileyo ekubeni oko kuya kuphezulu kwaye kunokukhokelela kwimiphumo emibi. Ukwazisa ugqirha wakho ukuba akucebise ngokufanelekileyo xa uqaphela ukuba uphoswe umlinganiselo wakho.
Ukongeza, i-Sermorelin kunye nokulahlekelwa kwesisindo ingaba yinto efanelekileyo ukuba uhamba nelayithi ngokutya okufanelekileyo kunye nokusebenza.
(1) Nguwuphi uhlobo lwe-Sermorelin Acetate ekhoyo?
Eli liza likhoyo kwiifom ezimbini ezibalulekileyo, ezibandakanya umjovo kunye nokulungiswa komlomo, kodwa zombini zivelisa iziphumo ezifanayo. Ezi fom ziquka;
♦ Ifom ejoyiweyo enomzimba -Yile ifomu engenayo injini ye-Sermorelin Acetate oku kuthetha ukuba kufuneka ilawulwe kuphela nge-injections. Unokuzifaka okanye ulungele ukutyelela rhoqo kwisakhiwo sakho seMicrothe ukuze ulandele umyinge. Kwiimeko ezininzi, ugqirha uya kukuqeqesha ngendlela yokuzitshabalalisa ekhaya ekubeni uza kufuneka uthathe izidakamizwa malunga neenyanga ze-12 okanye ngaphezulu.
♦ Amalungiselelo omlomo -Yile ifomu yeSermorelin Orally, oku kuthetha ukuba akudingeki ukuba ufumane iintlungu zeenjini. Unokukhetha ifom yeyona ndlela efanelekileyo, kuye kuxhomekeke kwinto okhululekile ngayo. Ukuba awuhambisani neenjini, unokuhlala ucela ugqirha wakho ukuba anike umyalelo womlomo. Khumbula, awukwazi ukuthatha zombini umlomo kunye nejoyijoyi ngexesha.
(2) Ngaphambi kokusetyenziswa; yintoni ofuna ukuyazi?
Kufuneka uqaphele kakhulu xa uthatha ukukhutshwa kwe-hormone-ukukhupha isicatshulwa ukususela ukuba ingathathwa ngokuchanekileyo kunokukhokelela kwimiphumo emibi. Musa ukuthenga i-Sermorelin Acetate kwi-pharmacy okanye nakwii-platforms ze-intanethi uze uqale ukuyisebenzisa ngaphandle kweengcebiso zakho zeyeza. Khumbula, imizimba yabantu ihlukile kwaye ngenxa yokuba le nkunkuma yasebenza kumhlobo wakho, akusiyo ngokuzenzekelayo ukuba kuya kuhamba kakuhle nawe. Yingakho kucebise ukuba ufunde uvavanyo lwezonyango kwaye uvumele i-professional health yakho ukuba ibeke isilinganiselo esifanelekileyo. Yazisa ugqirha wakho, ukuba ungaphantsi kwamanye amayeza kuba ezinye iziyobisi zingasebenzi kakuhle nge-Sermorelin Acetate. Ezinye zeemeko zempilo omele uzixelele ugqirha ukuba ngaba zibandakanya;
Ukuba uceba ukukhulelwa okanye sele usukhulelwe okanye nokuba uncelisa. Oku kuya kunceda ugqirha wakho ukuyila i-dosage efanelekileyo ukuba uqinisekise ukuba iziyobisi azichaphazeli umntwana okanye umntwana.
Ukuba uthe uthatha nayiphi na imveliso yonyango okanye imithi yonyango, isongezelelo sokutya, okanye ukuba uthatha nawaphi na ukulungiswa kwamanzi. Ezinye iziyobisi zingenakusebenza kakuhle ne-Sermorelin Acetate, kwaye kulungile ukwazisa amayeza akho ngaphambi kokuba uqale umjovo okanye umlomo wakho.
Ukuba ugugu lokutya, amayeza okanye ezinye izinto.
Kwakhona, xela ugqirha wakho ukuba unayo ingqondo okanye inzakalo yekhanda kunye nezifo ophantsi kwonyango okanye ukuba ngezinye izihlandlo ubuye.
Ezinye iziyobisi zingakwazi ukusebenzisana kakuhle ne-Sermorelin Acetate, ngelixa ezinye zinganciphisa ukusebenza kweziyobisi. Ngoko ke, njengoko kuchaziwe ngaphambili, kuhle ukuxelela ugqirha wakho kwanamanye amayeza owathathayo ukuze akucebise ngokufanelekileyo. Ezinye iingcamango zingancoma ukuba uqale ugqiba iziyobisi ozithathayo ngoko uqale uthabathe i-Sermorelin Acetate okanye ukuba azinako umphumo ungathabatha zombini iyeza. Unganqikazi ukuxelela umboneleli wakho wezonyango ukuba usebenzisa ezi zi yobisi;
I-Cyclooxygenase inhibitors, ezifana ne-indomethacin kunye ne-aspirin, i-glucocorticoids njenge-prednisone, i-Insulini, okanye amayeza anganciphisa amanqanaba akho e-thyroid njengePropylthiouracil. Ezinye ziquka i-somatostatin eneziyobisi ezikhupha i-somatostatin njenge-levodopa, kunye ne-clonidine ekubeni iyanciphisa amandla eSermorelin kwaye unganakufumana Sermorelin Acetate iziphumo nangemva kokuthatha iyeza ixesha elide.
Uluhlu lwezidakamizwa ezinokuchaphazela amandla eSermorelin Acetate ukusebenza emzimbeni wakho lide kakhulu, kwaye kutheni kubalulekile ukuba uxelele ugqirha wakho kwanaliphi na iziyobisi ozithathayo ukuze ube neziphumo ezingcono. Ngamanye amaxesha, kwanamayeza enicinga ukuba awunakuchaphazela, njengemishanguzo yemifuno ingakhokelela kwimiphumo emibi. Musa ukucinga nantoni na ukuba ufuna ukufumana iziphumo ezingcono kunye nezikhulu. Ukukhuseleka kwakhona qinisekisa ukuba uququzelele ugqirha wakho kwinkqubo yonke yeyeza. Uviwo lwezonyango ludlala indima ebalulekileyo phambi, ngexesha kunye nangemva kokugqiba umjikelo wokulinganisa.
Ukongezelela, iimvavanyo zeLebhu zingenziwa ngugqirha wakho ukujonga i-hormone yokukhula, imiphumo emibi, kunye nenkqubela phambili yonyango. Qinisekisa ukuba uzukise bonke ogqityiweyo bezonyango zakho kwiinzuzo ze-Sermorelin Acetate. Kwababhinqa, ukuba uyaphawula ukhulelwe ngexesha lakho lomyinge, yazisa amayeza ngokukhawuleza. Nangona, akucaci ukuba yintoni into enokwenza ngayo umntwana wakho okanye umntwana wakho, akukhuselekile ukuba uqhubeke nokuthatha i-Sermorelin Acetate xa uncelisa okanye ukhulelwe. Nangona kunjalo, kuphela emva kokuhlolwa kwezokwelapha xa ugqirha wakho unokukukhokela. Ungagcini ukuthatha umyinge xa ​​kule meko ngaphandle kokuxelela amayeza akho.
Bobabini iHGH kunye ne-IGF bafihliwe ngokuqhubekayo kwaye abahlali rhoqo. Ngoko ke, ukuhlolwa kwegazi okungafunekiyo kunye nokuhlalutya kungenako ukufumana ukuba iSermorelin Acetate iqalile ukusebenza okanye cha. Ubuninzi boogqirha abayalela iSermorelin Acetate okanye imishanguzo efanayo bavavanya ukuphumelela kweziyobisi nge-symptomology, oko kukufundwa kweempawu ukuhlalutya amayeza, ukubonakala kwenyama kunye nokuhlolwa kwegazi.
Uya kuqala ukufumana iinzuzo ze-Sermorelin Acetate emva kokuba uqale ukuphucula nokuphucula ikhwalithi emva kweiveki ezisixhenxe zokuthatha ifayili yakho. Nangona kunjalo, oku kuya kubonakala lula kuphela ngabantu abanobunzima bokufumana ubuthongo obuhle. Amanqanaba emandla omzimba aya kwandiswa, kwaye imizwa yakho iya kuphuculwa.
Ngokuqhelekileyo, izigulane ezininzi ziqala ukunika ingqalelo utshintsho olukhulu emzimbeni emva kweenyanga ezintathu ukuya kweziyisithandathu zeSermorelin unyango lwe-Acetate ikakhulukazi iSermorelin kunye ukuhla ukusinda. Ezinye zeempembelelo ezibonakalayo ze-hormone zokukhula emzimbeni ziquka ukuphuhliswa kobunzima bomzimba obukhulu kunye nokuphuculiswa okukhulu kwezempilo jikelele. Abantu abadala abaLwela Ukuguga ngeSermorelin baqala ukufumana iziphumo kwiinyanga zokuqala ze-3.
Ukufumana iziphumo ezingcono, kufuneka ujobe i-Sermorelin rhoqo ukususela ekugqityweni kwenkqubo yakho yomzimba ngokukhawuleza. Indlela yokusebenza kwezidakamizwa incike kakhulu kwi-chain of reaction kwi-process yakho yezinto eziphilayo ezikhokelela ekuveliseni ukuveliswa kwama hormone okukhula. Kwakhona, kuxhomekeke kwindlela yakho yomzimba, unokuqala ukujonga iziphumo ze-Sermorelin Acetate emva kwe3 okanye kwi-6 inyanga kuba kuthatha ixesha lokukhula kwamahomoni okusebenza kunye nokuhambisa iziphumo ezifunwayo.
Akukho xesha elicacileyo ukuba i-Sermorelin Acetate imele ithathwe, kodwa kufuneka unciphise okanye uyeke ukuthabatha izilwanyana emva kokuba ufumane i-hormone yokukhula ephezulu. Yingako iimviwo zeLab rhoqo ziyimfuneko ukubeka iliso kumazinga e-hormone. Ugqirha wakho uya kuba ngumntu ofanelekileyo wokunciphisa okanye ukucebisa ukuba uyeke ukuthatha isilinganisi sakho emva kokufumana uviwo lwezonyango. Ezinye izigulane zize zithathe i-Sermorelin Acetate malunga neenyanga ze-12 okanye ngaphezulu ngaphambi kokuba zifikelele kumazinga e-hormone yokukhula.
Ubuninzi bezilwanyana kwiimarike ukuba awunayo yonke imiphumo emibi engaba yincinci okanye enzima xa iyeza lisebenzise ngokuchanekileyo. Ukujonga kwi-Sermorelin Acetate ukuphonononga abanye abasebenzisi babika ezinye iimpawu zempembelelo. Nangona kunjalo, izigulane ezilandela yonke imiyalelo yokulinganisa, kunye nokuhlolwa rhoqo kwezonyango, ingxelo ingxelo encinane yeSermorelin Acetate.
Kucebise ukuba ubike iiphina iziphumo eziphambili ozifumanayo emva kokuthatha i-hormone yokwandisa iyeza. Iindaba ezilungileyo kukuba ugqirha wakho unokukunceda ukulawula imiphumo ye-Sermorelin Acetate ukuba uyamxelela ngexesha. Ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo eziza kwenzeka xa uthatha umlinganiselo wakho zibandakanya;
Intloko kwaye ngamanye amaxesha unomdla ongaqhelekanga emlonyeni wakho.
Ubunzima, ubunzima, ukuvuvukala, okanye ubomvu kummandla we-injection.
Kwi Uvavanyo lwe-Sermorelin Acetate Abanye abasebenzisi babonisa ukudideka kwabo namava amabi ayenayo ngeziyobisi eziqhelekileyo ukuba awulandeli imiyalelo yokulinganisa. Imiphumo emibini yecala iyanyamalala kunye nexesha, kodwa xa behlala ixesha elide kunokuba kulindeleke ukuba bathethe ugqirha wakho kukunceda ufumane isisombululo ngaphambi kokuba imeko ibuhlungu. Nangona kunjalo, kukho ezinye iziphumo ezibi kakhulu xa uziva nazo, kufuneka ubize amayeza akho ngokukhawuleza njengoko anokukhokelela kwiimeko zempilo ezinzima okanye ezingenakunyaniseki. Ezi ziphumo ziquka;
Ukukhathazeka okubonakalayo okunjengomngcingo, ukugqithisa, ubunzima bokuphefumula, ukuqina kwesifuba, ukuvuvukala ubuso, imilomo, umlomo, okanye ulwimi lwakho.
Ezi azizona zonke iziphumo zempembelelo ye-Sermorelin Acetate ukulindela kuba ezinye zazo zinokuxhomekeka kumntu othabatha isiza. Kungaba yinto efanelekileyo ukuxelela ugqirha wakho ukuba ubona into engavamile xa uthatha isilinganisi sakho. Nangona kunjalo, indlela efanelekileyo yokuzikhusela kwezi ziphumo zecala kukuba unamathele kwimimiselo yokulinganisa kunye nokuhlonipha bonke abagqirha bakho kwiimviwo zonyango. Ukugqithiswa kwesinye isinye esinye isizathu esibalulekileyo sesininzi seempembelelo zeAccetate side effects. Ngaloo ndlela, ukuba uyakrokrela ukuba uthathe i-dosage ngaphezu kokumiselwa, jonga nje ugqirha wakho okanye u tyelele isikhungo sezempilo sezempilo esiseduze ukuze uncede.
Indlela kuphela yokufumana iziphumo ezilungileyo zeSermorelin Acetate kukuqinisekisa ukuba uyithenga kumthengisi onokwethenjelwa kwaye othembekileyo. Ingaba ufuna ukulwa nokuguga kunye neSermorelin okanye ukulawula ubunzima bomzimba wakho, iziyobisi eziphezulu ziqinisekisa ukuba iziphumo eziphambili kunye nezikhawulezileyo xa ulandela imiyalelo yokulinganisa. Kukho abaninzi abathengisi beSermorelin kwiimarike, kodwa ukufumana okulungileyo akunjalo lula ukuba awuqapheli. Ugqirha wakho unokuba ngumntu ongcono kakhulu kukunceda uthenge i-Sermorelin Acetate.
Ngenye indlela, unokwazi ukubheka abathengisi abahamba phambili kwi-intanethi, kodwa qi ni sekise ukuthenga iSermorelin Acetate evela kumenzi onamava kunye nabathembekileyo okanye umthengisi weSermorelin. Musa nje ukuthenga amayeza avela nasiphi na ikhemisi okanye umthengisi we-intanethi ufumana intanethi kuba abanye banomdla kuphela ekwenzeni inzuzo kwaye abanako ukufumana umgangatho ophezulu kakhulu weSermorelin oqinisekisa iziphumo ezilungileyo.
Ngaphambi kokuba uthenge i-Sermorelin Acetate, jonga ukuhlaziywa kwamakhasimende kumthengisi ukukunceda wenze isigqibo esicacisiweyo. Okwangoku, sisona sikhulu se-Sermorelin Acetate nomvelisi kunye nomthengisi kule ndawo. Senza ukuhanjiswa okufike ngexesha, kwihlabathi kunye nathi Indleko yeSermorelin iyancitshiswe xa kuthelekiswa naleyo yabathengi abaninzi kwiimarike. Udinga kuphela ukwenza umyalelo wakho nge-smartphone yakho, ikhompyutheni okanye ithebhulethi, kwaye siya kuhambisa imveliso yakho ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Iifowuni zethu zeefowuni zihlala zivulekile 24 / 7, kwaye unokuqiniseka ngokufumana uncedo olukhawulezayo kwiqela lethu lenkonzo yamakhasimende nayiphi na ixesha odibana nathi. Kwakhona, siphumelele ukuphonononga kwethu kwe-Sermorelin Acetate kwaye uya kuphawula ukuba uninzi lwabaxhasi bethu luyaneliswa yimveliso yethu.
Sisoloko sicebisa bonke abathengi bethu ukuba bathenge iSermorelin Acetate kwiwebhsayithi yethu kodwa singayisebenzisi ngaphandle kokuhlolwa kwezonyango. Ugqirha kuphela kufuneka ubeke isilinganisi esifanelekileyo kwimeko yakho kwaye kukukuncede ukuba ulawule nayiphi na imiphumo engasenokuvela xa usebenzisa iziyobisi ezifana ne-Sermorelin Acetate. Phakamisa yonke imibuzo okanye iinkxalabo zakho ngenkonzo yakho yezokwelapha ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa iimveliso zethu ukuze ujabulele amaninzi enzuzo ye-Sermorelin Acetate.
Janvier, S., Cheyns, K., Canfyn, M., Goscinny, S., De Spiegeleer, B., Vanhee, C., & Deconinck, E. (2018). Ukungcola ukungcola kwezidakamizwa zeepolisiptide ezikhohlakeleyo ezigqithisekayo rhoqo kwi-market yaseBelgium. Talanta, 188, 795-807.
Weber, C., Krug, O., Kamber, M., & Thevis, M. (2017). Uhlalutyo olulungeleleneyo nolungalinganiyo lweemveliso zokudambisa ezithathwe kwiSwitzerland Border. Ukusetyenziswa kwezinto kunye nokusetyenziswa kakubi, 52(6), 742-753.
Makimura, H., Feldpausch, MN, Stanley, TL, Sun, N., & Grinspoon, SK (2012). Ukukhutshwa kwe-hormone yokunciphisa ukunyusa kunxulumene ne-LDL encinci kunye nobukhulu be-particle ye-HDL. Endocrinology, 76(2), 220-227.
I-Oxytocin Acetate: I-hormone yothando eya kuphucula ubuhlobo bakho
I-PT-141 (i-Bremelanotide): Isilwanyana esitsha esisetyenziselwa ukusetyenziswa kakubi ngokwesini